တစ်ခုတည်းနဲ့ အချိန်ကုန်သက်သာတဲ့ Essence ရဲ့ လက်သည်းဖျက်ဆေးလေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » တစ်ခုတည်းနဲ့ အချိန်ကုန်သက်သာတဲ့ Essence ရဲ့ လက်သည်းဖျက်ဆေးလေး
တစ်ခုတည်းနဲ့ အချိန်ကုန်သက်သာတဲ့ Essence ရဲ့ လက်သည်းဖျက်ဆေးလေး
အသဲတစ်ခြမ်းတို့ရေ အခုဆိုခေတ်ကြီးက ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေကြရပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာမရှိသလောက်တောင်ရှားမှရှားပဲ။ အချစ်တို့ဆိုပိုဆိုးတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ရုံးသွားကျောင်းသွားနဲ့ အလှပြင်ဖို့တောင်အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတော့မလား? နောက်တစ်ခုက အလှပြင်တာထက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ပိုအချိန်မပေးချင်ကြပါဘူး။ ပျင်းတာနဲ့အလုပ်မအားတာနဲ့အဲ့လိုအကြောင်းတွေနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ကြဘူးပေါ့။ အဲ့ထဲကမှ လက်သည်းခြေသည်းတွေကိုပြုပြင်ရတာကိုတော့ တကယ့်ကို ပစ်ထားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်လေးတွေသွားလိုက် spa လေးတွေ လိမ့်လိုက်နဲ့သာယာတဲ့သူတွေရှိသလို အိမ်မှာပဲ ပြုပြင်ချင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
လက်သည်းလေးတွေကို အရောင်ဆိုးတာကကောင်းပေမယ့် အမြင်မှာတော့လှနေပေမယ့် ပြန်ဖျက်ပေးဖို့ကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။ လက်သည်းအရောင်တွေက တစ်ဝက်တစ်ပြတ်နဲ့ဆိုရင်ကြည့်မကောင်းတဲ့အပြင် အများအမြင်မှာလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဖျက်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုတဲ့သူလေးတွေအတွက် Essence က ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါပြီ။ Essence ဆိုတာကတော့ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းပစ္စည်းလေးတွေကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ brand လေးတစ်ခုပါ။ လက်သည်းဆိုးဆေးလေးတွေရော ဖျက်ဆေးလေးတွေကိုပါထုတ်လုပ်ထားလို့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ အဲ့ထဲကမှ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြေတဲ့ ပစ္စည်းကောင်းလေးကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးမလို့ စိတ်ဝင်စားကြလား?
သူလေးကတော့ Quick & Easy Nail Polish Remover လေးပါ။ ဟင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလည်း ပြောပြမယ် Nail remover ကြီးလားဆိုတော့ စိတ်မလာပါနဲ့ဉီး။ လာမယ်လေ။ အရင်ကဆို လက်သည်းဖျက်ရင် nail remover တွေ cotton pad တွေနဲ့ တစ်ခုချင်းစီအလုပ်မရှုပ်တော့ပဲ သူလေးကတော့ ready to use လေးပါ။ လက်သည်းလေးကို ဘူးလေးထဲထည့်လိုက်တာနဲ့နတ်ရေကန်ထဲခုန်ဆင်းလိုက်သလို သန့်ရှင်းပြောင်လက်သွားစေမယ့် လက်သည်းဖျက်ဆေးလေးပါ။ 75 ml ရှိတဲ့ ဘူးလေးထဲမှာ ဖော့လေးကိုလက်သည်းဖျက်ဆေးအရည်တွေတစ်ပါတည်း ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ခုတည်းနဲ့ခရီးတော်တော်ရောက်ပါတယ်နော်။ ဖျက်ရခက်တဲ့လက်သည်းနီတွေကိုတောင် တစ်ခါတည်းနဲ့ ပြောင်စင်စေလို့ wow ပေါ့နော်။
လက်သည်းကို sponge လေး ( sponge အလယ်တည့်တည့်မှာ အပေါက်လေးပါပါတယ်) ထဲနှစ်ထားလိုက်ပြီးတော့ ခဏလောက် ထားပေးထားလိုက်ပါ။
မပြောင်မှာစိုးရင်တော့ လက်လေးကို စက်ဝိုင်းပုံစံလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် လှည့်ပေးလိုက်ပါ။
အဲ့ ၂ ဆင့်ပြီးတာနဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ လက်သည်းလေးကို တစ်ခဏအတွင်းရရှိနိုင်ပါပြီနော်။ ပြီးရင်တော့ အဖုံးလေးကို ပြန်ပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ ဖွင့်ထားတာကြာသွားရင် အထဲကအရည်တွေကခြောက်သွားနိုင်လို့ပါ။
အထဲကအရည်တွေကုန်သွားရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လက်သည်းဖျက်ဆေးအရည်ကို လောင်းထည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်နော်။ စျေးလေးကတော့ 5000 ကျပ်တည်းရှိလို့ မြန်မြန်လေးသွားဝယိလိုက်တော့နော်။
ဒီလိုမျိုး အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ခေတ်မီတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို စျေးနှုန်းအသင့်အတင့်လေးနဲ့ရနိုင်တာဆိုတော့ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်လေ။ အိတ်လေးထဲသယ်သွားပြီး ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတယ်လေ?　ပွဲသွားခါနီးတို့အချိန်မရှိဖြစ်နေရင် ဒါလေးတွေကွက်တိ။
တစ်ချောင်းကို 6900 နဲ့ဝယ်လို့ရမယ့် Maybelline က အသစ်ထွက်တဲ့အရောင်လေးတွေ
Morphe နဲ့ JaclynHill တို့ရဲ့ eyeshadow palette အသစ်ကြီးတွေ
Tags: Nail remover